Deegaan in Jubaland, SomaliaTemplate:SHORTDESC:Deegaan in Jubaland, Somalia
Magaalda Jilib waa magaalada ku taal Gobolka Jubbada Dhexe, isla markaana ah magaalo madaxdii hore ee Gobolka Jubbada Dhexe waxaana hoos yimaada tuulooyin badan. Magaaladani waxay caan ku tahay tabcashada beeraha.
waaxana ku dhaqan degmadan beelaha sheekhaal gaar ahaan loobage, iyo qeybo kamida ah qowmiyada jareerweyne
Jilib waa magaalo dad aad u fara badani ay ku noolyihiin waxaana nawaxigeeda ku yaala warshaddii Mareeyey ee sonkorta iyo mashrucii faanole ee biyo xireenka.
Magaaldaa wa shantaraal waxa isku marta 4 wada oo kabaxdo ama so gasho waxana ku yaala hoteelo farabadan iyo shirkadaha is garsiinta telephone nada sida Hormuud iyo Nation. Hotelada ugu caansan waxa kamida ah hotel Ganane, hotel Hombooy iyo hotel Guuleed. waxa kalo jirta diinimadii dabka oo ku taala tuulada malende ee jilib hoos timaada.
Dagmada jilib waxa si weyn udega beelaha afarta Sheekhaal loobage iyo adeerkood sidoo kale waxa tuuloyika hoos yimaada deegaan ahaan u badan isla beellaha Sheekhaal iyo jareerweyne. Jareerweyne gaar ahaan mushunguuli waxay u badan yihin wabiga jiinkiisa Beesha sheekhaalna tuulooyinka degmada hoos yimaado inta u badan iyagaa gaar u leh
Degmooyinka Gobolka Jubbada Dhexe
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jilib&oldid=213826"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Luuliyo 2021, marka ee eheed 22:17.